नत आँखा नत आफन्त, बुढेसकालमा कोहि छैन सहारा , एक्लै अनि भोकै ! (हेर्नुस् भिडियो ) – Online Khabar 24
नत आँखा नत आफन्त, बुढेसकालमा कोहि छैन सहारा , एक्लै अनि भोकै ! (हेर्नुस् भिडियो )
एक सेकेन्ड हामिले आँखा बन्द गरेर यो संसार हेर्ने प्रयाश मात्रै पनि गरेउ भने हामिलाई थाहा हुनेछ आखाको महत्त्व के हो भनेर । यी आमाले भने यो उमेरमा आँखा गुमाउनुभयो । दुख आँखा गुमाउनु मात्रै कहाँ थियोर आफन्त कसैले पनि नहेरेको झनै दुखमाथि दुख छ ।
जिन्दगीभर दुख गरेर र क्सि बेचेर पैसा कमाउनु भयो र घर सम्पत्ति जोड्नु भयो तर आज आफ्नै घर र आफ्नो सम्पत्ति हेर्ने आमासग आँखा नै छैन ।आमाको अध्यारो जिन्दगी त्यसमाथि कोहि पनि सहारा छैन ।
आमालाई खाना पकाएर त के तातो पानी समेत उमालेर दिने मान्छे कोहि पनि छैनन् ।हुदा त आमाले केही खानुहुन्छ तर केही पनि नहुदा आमा भोकभोकै बस्ने गरेको बताउनुहुन्छ । यो जुनिमा यो भन्दा ठूलो चो ट आमाको लागि के नै हुन्थ्यो होलार ।
जिन्दगीले हामिलाई कहाँ लगेर कतिबेला सुताउदोरहेछ कल्पना समेत गर्न नसकिने कुरो हामिले भोग्नु पर्दो रहेछ ।गुल्मिको गुल्मिदरबार गाउपालिका वडा नम्बर १ को भोटेमाझि भन्ने ठाउबाट आज तपाईहरु समझ यी बुढि आमाको संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्दैछौ । दि हाइलाइटस बाट साभार गरियको खबर ।
Prevसन्तान जन्माउने प्रक्रियामा म्याकुरी, छोरा छोरी जे भए पनी पशु नाम राख्ने भन्दै हँसाय उनले (भिडियो हेर्नुस्)
nextसाथीहरुलाई राती सहयोग गर्न पुगेका भुपेन्द्रलाइ साथीहरुले नै …..